‘विपर्यास’माथि विशृङ्खल चर्चा – Chitwan Post
‘विपर्यास’माथि विशृङ्खल चर्चा
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १७, २०७१
करिब चार दशक लामो शिक्षण पेसा र विद्यार्थी तथा शिक्षकका लागि सन्दर्भ पुस्तक लेख्दै आख्यान क्षेत्रमा प्रवेश गरेका टीकाराम रेग्मी नेपाली साहित्यमा भने नवआगन्तुक नै हुन् । ‘फेसबुक’को सञ्जालमा रहेको ‘लघुकथा कुनो’मा रचना सम्प्रेषण गर्दै लघुकथा क्षेत्रमा लागेका रेग्मीले करिब दुई वर्षभित्रै लघुकथाको सङ्ग्रह नै तयार पारेछन् । यो कुरा सुन्दा एउटा चेलोलाई खुसी लाग्नु स्वाभाविकै हो । त्यो भावनालाई अहिले शब्दमा उतार्न निकै कठिन भएको छ । यतिबेला गुरूको कृतिमाथि समीक्षा लेख्ने जिम्मा आएको छ ।
समीक्षा भन्ने कुरा ज्यादै कम व्यक्तिले लेख्ने र त्योभन्दा पनि कम व्यक्तिले पढ्ने कुरा हो । यति भएर पनि साहित्यसँग यसको नजिकको नाता छ । म आफू रूचिले साहित्यमा लागेको भए पनि समीक्षामा भने पत्रकारितासँगै लहैलहैमा लागेको हुँ । आजभन्दा करिब दुई दशकअघि ‘साप्ताहिक नारायणी’को प्रकाशन प्रारम्भ भएपछि सम्पादक दाजु सुरेश अधिकारीको आग्रहमा छोटा टिप्पणीहरु हुँदै समीक्षामा प्रवेश गरेको हिजोजस्तै लाग्छ । यो अवधिमा केही फुटकर समालोचनाका अतिरिक्त पुस्तकको चर्चा गर्ने काममात्रै गरिबसेको रहेछु । यसका लागि आफ्ना समवयी मित्रका पुस्तकहरु नै बढी छानिएछन् । आज आएर मेरो हातमा समीक्षाका लागि मलाई विद्यालय जीवनमा अङ्ग्रेजी पढाउने गुरू टीकाराम रेग्मीको लघुकथा कृति ‘विपर्यास’ परेको छ ।
प्रस्तुत ‘विपर्यास’ लघुकथा सङ्ग्रहभित्र छैसट्ठीवटा लघुकथाहरु समेटिएका छन् । तिनमा २० वटा एक पृष्ठ र छयालीसवटा दुई पृष्ठको आयामका छन् । घटीमा १०४ शब्ददेखि बढीमा २३० शब्दसम्मका यी लघुकथाहरु आयामका दृष्टिले उपयुक्त छन् । कथाकार स्वयंले देखेका, भोगेका र अनुभव गरेका विविध सन्दर्भहरुलाई प्रस्तुत सङ्ग्रहका लघुकथाहरुको मूल विषयवस्तु बनाइएको पाइन्छ । यसर्थ, यस सङ्ग्रहभित्र विषयवस्तुगत विविधता पाइन्छ ।
वर्तमानमा मान्छेले भोग्नु परेका विविध समस्याहरुको वरिपरि घुमेका यी लघुकथाहरुमा मान्छेका वैयक्तिक कमजोरी, चरित्रहीनता, आडम्बर, ढोँग, सङ्गतिहीनता, आर्थिक समस्या, सामाजिक विकृति, राजनीतिक विषमता मूल कथ्य बनेर आएका छन् । बदलिँदो सामाजिक परिवेशका कारण मानवीय संवेदना मर्दै गएको र आजका मान्छेहरु क्रमशः हृदयहीन बन्दै गएको कुरालाई लघुकथाकारले सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन् । परम्परित शैलीमा रचिएका यी कथाहरुमा व्यङ्ग्य चेतना पनि भेट्न सकिन्छ । आधाजसो कथाहरुमा चोटिलो प्रस्तुति भेटिन्छ भने कुनै–कुनै कमजोर खालका लघुकथाहरु पनि छन् । समग्रमा पहिलो सङ्ग्रह भए पनि ‘विपर्यास’ सफल कृति बन्न पुगेको छ । यहाँ कृतिभित्रबाट केही उदाहरण प्रस्तुत गरिन्छ ।
तेस्रो दिन बुहारीको लागि चिता बन्दै थियो ।
मलामीतर्फ फर्केर गम्भीर हुँदै देवी बोले, ‘कति शक्तिशाली रहेछ हँ यो पैसा ? यसले त आफन्त, चिनजान, पेसागत दायित्व सबैका आँखामा पट्टी लगाँउदो रहेछ है ।’
(पैसा ः पृ. १७)
शरीरको आधा भाग थाङ्नो बोराले छोपिएको र आधा भाग नाङ्गै, कपाल जिङ्ग्रिङ् परेको, अनुहारमा कालो पोतो लगाएजस्तो, एक हातमा प्लास्टिकको फोहर झोला झुन्ड्याउँदै, नालीमा फालिएका खानेकुराका टुक्रा, सिता खोज्दै, टिप्दै, मुखमा हाल्दै गरेको एउटा मान्छेजस्तै आकृति थियो त्यहाँ । सुरेशले हाँस्दै भन्यो, ‘ऊ हेर त, मान्छेले गरेको यो अकल्पनीय प्रगतिलाई चुनौती दिँदै छ, त्यो जन्तु ।’
(मान्छे ः पृष्ठ, २३)
मायालु स्वरमा सम्झायो, ‘हैन, के भाको तिमेरू ? कमाएको जति उही दिन उडाउनु पर्छ ?’ त्यो पुरूष एकछिन त सोचमग्न देखियो, तर तत्कालै जङ्गियो, ‘भो गप नअर्नुस् सर, तपैँले झैँ हाम्ले नि कमाको बचाम्ने भा तपैँकाँ को आम्थ्यो र काम अर्न ?’
(चारो ः पृष्ठ, ७४)
‘बूढा, आज नातिनी जन्मिछ नि !’ खाना पस्कँदै बूढीले सुनाई ।
‘हो र ?’ उसको दृष्टिमा नाति–नातिनी दुवैका आकृति घुमे । उसको मुहारमा एकाएक चन्द्रमा उदाए ।
‘बूढा, आज सन्तेको कुकुर
मरेछ नि !’
सुत्ने बेलामा बूढीले सुनाई ।
‘हो र ?’ उसको अनुहारको सूर्यास्तसँगै शिर घोप्टो पार्दै भन्यो, ‘हाम्रो बाटो पनि यही त होला नि !’
(जीवन ः ११२)
‘तिमी जवान भएपछि यो लोग्ने सुहाउँदैन । उसको माया मार्नुपर्छ ।’ सोची– त्यो बेला बूढो पोइको के काम ? ‘तिम्रा छोराछोरी पनि तिमी भन्दा बूढा देखिने छन् । तिनलाई पनि छाड्नुपर्छ ।’ साची– हो त ! आ…. फेरि जन्माऊँला । ‘मञ्जुर छ, प्रभो !’ ‘तिम्रा सबै गरगहना र शृङ्गारका सामग्रीहरु पनि त्याग्नुपर्छ ।’ सानुमायाको अनुहार एकाएक चाउरियो । चिच्याई, ‘भो प्रभो, यी सबै त त्याग्न सक्दिनँ ।’
(वरदान ः पृष्ठ, ७५–७६)
‘मुठी कसेर हात उठाउँदाको मुस्कान ऐले नि उस्तै । हात मिलाउँदा नि उस्तै ।’ उसले मनमनै सोच्यो ।
‘मालिक, … !’ भन्दै यसो हेर्दा ऊ त्यहाँ थिएन । सन्तेले एक हातले टोपी अड्याएर हे¥यो । ऊ त नवनिर्मित मलको आठौँ तलामाथिको छतमा पुगिसकेको रहेछ । सोच्यो, ‘राजा हुने बाटो होला नि, क्या बात, कमरेड !’
(कमरेड ः पृष्ठ, ४८)
माथि उदाहरणस्वरुप प्रस्तुत गरिएका लघुकथाका अंशहरुले नमुनाका रुपमा सङ्ग्रहभित्रका सन्दर्भहरुलाई सङ्केत गरेका छन् । पहिलो उदाहरणले पैसाका कारण भोग्नु परेको समस्या, दोस्रोले मान्छेले मान्छेलाई गर्ने व्यवहार, तेस्रोले चेतनाको स्तर, चौथोले उमेरका कारण आउने वैचारिक परिवर्तन, पाँचौँले नारी मनोविज्ञान र छैटौँले राजनीतिक विकृतिमाथि औँला ठड्याउने काम गरेका छन् । यी र यस्तै खालका परिस्थितिहरु दर्शाउने काम सङ्ग्रहभित्रका अन्य कथाहरुले पनि गरेका छन् ।
गद्यमा लेखिने र आख्यान बोक्ने भएर पनि संरचनागत हिसाबले छोटो र कसिलो हुनु लघुकथाको प्रमुख विशेषता हो । संक्षिप्त भएर पनि आफैँ पूर्ण हुनु यसको अर्को विशेषता हो । तीव्रतापूर्वक अगाडि बढ्ने घटना सन्दर्भमार्फत पाठकको मन र मस्तिष्क दुवैलाई छुन सक्ने लघुकथाको शक्ति हो । यी सबै अभिलक्षणहरुसँग अत्यधिक मात्रामा नजिकको देखा पर्ने ‘विपर्यास’ भित्रका लघुकथाहरु सशक्त बनेका छन् ।
काव्यका कारण सशक्त मानिने चितवनको माटोलाई देशभित्रका अन्य ठाउँका स्रष्टाहरुले आख्यानका दृष्टिले कमजोर मान्ने गर्थे । त्यसको प्रतिउत्तर दिनेहरुको पङ्क्तिमा लघुकथाकार टीकाराम रेग्मी पनि उभिएका छन् । उनको आख्यानकारिताको उच्च सम्मान गर्दै छिट्टै अर्का कथाका र उपन्यासका कृतिहरु पनि पढ्न पाइयोस् भन्ने शुभकामनासहित यो लेखनी बन्द गर्छु ।
कृति ः विपर्यास
कृतिकार ः टीकाराम रेग्मी
प्रकाशक ः अक्षर समूह, चितवन
मूल्य ः रू. १५० ।
पृष्ठ ः ११२+२०
जंगलमा हराएका पर्यटकले यसरी पाए नयाँ जीवन
गणतान्त्रिक सरकारको उपहार